मध्यरातमा पाँच घण्टा भारतीय दुतावास छिरेर के गरे विजय गच्छादारले ? - Asian Samachar
मध्यरातमा पाँच घण्टा भारतीय दुतावास छिरेर के गरे विजय गच्छादारले ?
काठमाडौ- संविधान संशोधनमा ब्यवस्थापिका संसदभित्र गणितिय खेल सुरु भइरहेका बेला मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष बिजयकुमार गच्छदारले भारतीय दूतावास लैनचौरमा पाँच घण्टा बिताएका छन् । सोमवार साँझ भारतीय दूतावास लैनचौर पुगेका गच्छदार मध्यरातमा फर्केको स्रोतले बताएको छ ।
संविधान संशोधन बिधेयक पास गराउन भारतीय राजदूत रंजित रे यतिबेला निकै सक्रिय बनेका छन् । विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुलाई बोलाएर उनले दूतावासमै डिनर मिटिङ पनि गरिरहेका छन् । मंगलबार गच्छदारलाई बोलाएर पाँच घण्टा छलफल गरेको स्रोतले बतायो ।
सरकारले ब्यवस्थापिका संसदमा संशोधन बिधेयक दर्ता गरेपछि पनि मधेसी मोर्चा असन्तुष्ट नै थिए । तर भारतीय राजदूत रंजित रेले मधेसी मोर्चाका नेताहलाई डिनर मिटिङमा बोलाएर मनाएपनि मोर्चाको एक घटक संघिय समाजबादी फोरम भने अझै असन्तुष्ट नै छ ।